महिलाहरु आफु भन्दा कम उमेरका युवाहरुलाई यसरी फसाउदै छन् | onlineharpal.com
on: ८ कार्तिक २०७३, सोमबार २१:१२ In: समाज
दुई छोराकी आमा भर्खर जुँगाको रेखी बसेको तन्नेरीसँग चक्कर चलाउँछिन्। कुनै ४० वर्षकी महिला २० वर्षको युवासँग रोमान्स गर्छिन्। यस्तो सम्बन्धको नियत के हुन्छ? देहसुख अर्थात् सेक्समात्र हो त? श्रीमान् विदेशमा हुने, श्रीमान्को माया नपाउने, असन्तुष्ट र कुण्ठित महिलाहरूले यस्तो सम्बन्ध राखेको पाइएको छ। उता तन्नेरीहरूका आफ्नै कथा छन्। उनीहरू ‘आन्टी’हरूसँग फस्नुका कारण अनेक छन्। कसैका लागि यो एकप्रकारको रोजगारी हो, कसैका लागि आर्थिक संकट हल गर्ने उपाय। अनि, कसैका लागि परिपक्व महिलासँग देहयात्राको आनन्द। यस्तो सम्बन्ध राख्ने प्रवृत्ति किन बढ्दै छ समाजमा? अनि यसका जटिलता के–के हुन्? अम्मर जिसीले केलाउन खोजेका छन्। –
केस नं. १ काठमाडौँका २३ वर्षीया जनम परिवारले बिहेको कुरा झिक्यो कि सुइँकुच्चा ठोक्छन्। अरू विषयका पारिवारिक छलफलमा उनी सहभागी हुन्छन्। तर, बिहे भन्नासाथ उनको सातो जान्छ। कारण, उनी आफूभन्दा झन्डै दोब्बर उमेरकी महिलासँगको प्रेममा फसेका छन्। एक प्रहरी निरीक्षककी ४२ वर्षीया श्रीमतीको मायाजालमा परेका जनमलाई अहिले यो सम्बन्ध निल्नु न ओकल्नु भइरहेको छ। भन्छन्, ‘पहिले बिहे भएको र दु–दुइटा छोराकी आमा हो भन्ने थाहै भएन। आँखा चिम्लेर लभ गरियो। अहिले उम्किनै गाह्रो भा’छ।’ उनका श्रीमान् प्रायः घरबाहिर हुने र उनको खासै पर्वाह नगर्ने भएकाले उनी आफूसँग लहसिएकी जनम बताउँछन्। ‘मैले छुँदामात्रै पनि मक्ख पर्छिन्,’ उनले भने, ‘मैले हेरेको, छोएको साह्रै मन पर्छ रे। मसँग टाँसिरहन खोज्छिन्। त्यसैले मैले पनि उनलाई छोड्न सकिरहेको छैन। मलाई मर्का पर्दा सहयोग पनि गर्छिन्। साढे तीन वर्षमा करिब सात लाख रुपैयाँ सहयोग पाइसकेँ।’
केस नं. २ शंखमूल, काठमाडौँका २४ वर्षीय विवेकको जिन्दगी ऐसआरामसाथ बितिरहेको छ। कामधन्दा, रोजगारी केही छैन। दिनभरि घरतिरै बरालिने वा साथीभाइसँग डुल्ने गर्छन्। यद्यपि, उनलाई आर्थिक संकट कहिल्यै पर्दैन। चितवनस्थित बा–आमालाई पनि गुहार्दैनन् उनी। ‘आयआर्जनको अर्कै स्रोत जुटाएको छु,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा सुड्डी–फ्रेन्ड छे मेरो। म भनेपछि हुरुक्कै हुन्छे। पैसाको बन्दोबस्त उसैले गर्दिन्छे। जति मागे पनि ‘छैन’ भन्दिन। आनन्दै छ मलाई।’ कमला नामकी ४६ वर्षीया महिलासँग उनको ‘चक्कर’ छ। उनको घर विवेकको डेराछेउ छ। कमलासँग किरानापसलमा भेट भएको र एक महिनाको हाई–हेलोपछि सम्बन्ध सुरु भएको विवेकले बताए। कमला एक छोरा र एक छोरीकी आमा हुन्। उनका श्रीमान् दुबईमा छन्। ‘छोराछोरी स्कुल पठाएपछि मलाई फोन गर्छे,’ विवेकले आफ्नो ‘ड्युटीआवर’ बारे सुनाए, ‘त्यसपछि म उसको घर जान्छु। र, ४ बजेसम्म उतै बस्छु प्रायः।’ कमलाले विवेकका सम्पूर्ण आर्थिक समस्या टारिदिने गरेकी छन्। पेट्रोल खर्च, मोबाइल रिचार्ज, पकेटमनी सबैथोकको जोहो कमलाले नै गर्ने गरेको विवेकले बताए। ‘एसएफ (सुड्डी फ्रेन्ड) को आवश्यकता मैले पूरा गर्दिन्छु, मेरो आवश्यकता उसले,’ विवेकले भने, ‘मसँग हुँदा त बूढीमाउ ‘फेरि टिनएजमा फर्केझैँ लाग्छ’ भन्छे।’
केस नं. ३ काठमाडौँ, सुकेधाराका अविनाश प्रायः बागबजारमा भेटिन्छन्। ‘आन्टीले बोलाइरहन्छिन्,’ बागबजार धाउनुको कारण सुनाउँछन् उनी, ‘आफू त आन्टीको सेवक न परियो। जहिले बोलायो, तहिले आइदिनुपर्छ।’ ४४ वर्षीया आन्टीलाई हरबखत सेवा दिन तत्पर अविनाश २१ वर्षका छन्। भन्छन्, ‘मेरो गर्लफ्रेन्ड छे, कलेजमा। बागबजारमा चाहिँ ओभरटाइम गरेको हुँ।’ उनका अनुसार आन्टीका श्रीमान् बागलुङमा छन्। ‘वर्षमा एकदुई चोटिमात्र आउँछन् अंकल,’ अविनाशले भने, ‘आन्टी धेरैजसो एक्लै हुन्छिन्। छोराछोरी पनि छैनन्। त्यसैले मलाई बोलाइरहन्छिन्।’ यी दुईको चक्कर चलेको दुई वर्ष भयो।
केस नं. ४ धरानका दीपेश यही अक्टोबरमा इजरायल उड्दै छन्। ‘उतै सेटल हुने गरी जाँदै छु,’ उनले भने, ‘केटी मुसलमान भएकाले बिहे गर्न अलि समस्या भइरहेको छ। मैले धर्म परिवर्तन गर्नुपर्छ रे। त्यसका लागि कागजात पठाइसकेँ। अक्टोबरसम्ममा सबै काम बन्छ होला।’ दीपेश टुरिस्ट गाइड हुन्। पर्यटक घुमाउने क्रममा उनको भेट इजरायलकी अथालियासँग भएको थियो। ‘त्यो बेला नै उसले मलाई खुब मन पराई,’ दीपेश भन्छन्, ‘इजरायल पुगेपछि पनि फोन गरिराख्थी। मेरा लागि ल्यापटप, मोबाइल आदि पठाइदिन्थी। इजरायलको सरकारी कर्मचारी हो ऊ। पैसा टन्न कमाउँछे। एकदम गाँठवाली छे।’ तिनै ४९ वर्षीया अथालियाको पहलमा २५ वर्षीय दीपेश इजरायल जान लागेका हुन्। ‘खै, किन हो, लास्टै माया गर्छे मलाई,’ दीपेश भन्छन्, ‘मैले पनि माया गरेजस्तो गर्दिन्छु। उता गएपछि राम्रो काममा लगाइदिन्छु भनेकी छे। जिन्दगी बन्छ भने किन नजानु?
संसारमा भुकम्प ल्याउदै प्रियंका चोपडा र जेनिफर लोपाज